नागरिकता नपाउनेको पीडा : इन्जिनियरिङ सकियो, रोजगारी छैन Global TV Nepal
स्थगित गरिएको खोप अभियान पुनः सुचारु गर्दै युरोकप : इंल्यान्डलाई क्रोएसियाको चुनौती प्रचण्डको प्रभावले पतनमै पुर्याउँछ : सुर्य थापा मेरा दुई नयन सिरहा गोली काण्ड: तीन जना पक्राउ माथिबाट पहिरो झरेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असार ३ गते बस्ने प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
नागरिकता नपाउनेको पीडा : इन्जिनियरिङ सकियो, रोजगारी छैन
ग्लोवल टि.भी. बुधबार, जेष्ठ २६, २०७८ 0
गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग रु पाँच लाख ऋण लिएर इन्जिनीयरिङ अध्ययन गरे । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न शुरु गरेको केही समयमा उनीसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेश गर्न नसकेपछि साफीले पाएका रोजगारीबाट हात धुनुप¥यो । अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उनको परिवार चिन्तामा डुबेको छ ।
“साहुको ऋण बढेर रु १५ लाख भएको छ, रातदिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुप¥यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने ?, साहुको सधैँको किचकिचले निराश बनायो”, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उनले भने ।
साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् । कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाई छ ।
नागरिकता नभएका कारण यस्तो समस्या भोग्ने साफी एक्ला व्यक्ति भने होइनन् । गोदावरी नगरपालिका–१३ झरुवारासी, ललितपुरका रुपक पहारीको भोगाइ पनि उस्तै छ । पहारी सानै हुँदा बाबुले आमालाई छोडेर हिँडे । आमासँग मामाघर बस्दै आएका पहारी हाल कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् । बाबुको नागरिकता नभएका कारण उनको अहिलेसम्म जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेत बन्न सकेको छैन ।
कसरी नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने भन्ने चिन्ताले पहारीलाई सताएको छ । उच्च अदालत नेपालगञ्जले नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनू भनी आदेश गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएपछि एक स्थानीयवासीले गत वर्ष आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१८ दाङका मोहम्मद फारुकीलाई पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले रजिष्ट्रेशन दर्ता गर्न नै नागरिकता माग ग¥यो । बाबुको जन्मसिद्ध र आमाको अङ्गीकृत नागरिकता भए पनि उनले नागरिकता पाउन सकेको छैन ।
संशोधित नियमावली दुई दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएकामा अझै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र नभएकाले यसअघि सरकारले जारी गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ समेत कार्यान्वयनमा चुनौती आएको उनले सुनाए ।
नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली नागरिकले अझै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले वास्तविक तथ्याङ्क लिन यसैवर्ष गर्न लागिएको जनगणनामा नागरिकता छ वा छैन ? भनी प्रश्नावली थप गर्नुपर्ने माग मञ्चले राख्दै आएको छ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कानून स्पष्ट, पारदर्शी एवं कसैलाई दिन नसकिने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने अधिवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणका सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिइएकाले पनि सबैतिर समानरुपमा काम हुन नसकेको सरोकार भएका निकायका अधिकारी भनाई छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाण दिइएको छ । दुई वर्ष अवधि राखेर एक लाख ९० हजार ७२६ लाई जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गरिएको हो । यसरी नागरिकता लिएकाका सन्ततिलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को ९३० ले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिए पनि दाङका फारुकीले अझै पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।
बालश्रम विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस आज
टिकाथलीको फर्निचर उद्योगमा आगलागी, नियन्त्रण प्रयास जारी
स्थगित गरिएको खोप अभियान पुनः सुचारु गर्दै